Shuruudaha iyo Xaaladaha -
DHAMMAAN XAQIIQOOYINKA, XAALADAHA, IYO SIYAASADAHA ISKU DIYAARINAYAAN BULSHADA BULSHADA AH EE BULSHADA 'WEBSITE WAXYAABAHA KALA DUWAN ISBEDELKA LIISKA. ISTICMAASHO LAGU QAADO SI AAD KA QAADATAY MAGAALADA, SHAQAALAHA, IYO SIYAASADAHA.
Adigoo isticmaalaya website-ka, waxaad ku heshiinaysaa in lagu xiro shuruudaha Shuruudaha iyo Shuruudaha Isticmaalida, dhammaan sharciyada iyo xeerarka khuseeya, iyo inaad isku waafaqsan tahay inaad adigu masuul ka tahay fulinta shuruucda maxalliga ah ee khuseeya. Haddii aadan ku raacsaneyn mid ka mid ah ereyadan, waxaa lagaa mamnuucay inaad isticmaasho ama aad gasho boggan. Maaddooyinka ku jira boggan internetka waxaa lagu ilaalinayaa xuquuqda daabacaadda iyo sharciga ganacsiga.
2. Siyaasadda Gaadiidka
SHIRKADDA DOMESTIC (Amarada Maraykanku kaliya)
Waxaanu ku amraynaa dhammaan amarrada Adeegga Boostada Mareykanka (www.USPS.com)
Wixii amarrad ah oo lagu meeleeyay Maraykanka, fadlan u ogolow 7-9 maalmaha ganacsiga laga bilaabo maalinta lacag bixinta ee aad hela xirmadaada (dhammaadka toddobaadka iyo maalmaha fasaxa ma aha maalmaha ganacsiga). Tani waa qiyaas lagu saleeyo celceliska maraakiibta celcelis ahaan sidaas awgeedna aad ayay u dheeraan kartaa ama ka yar tahay maalmaha ganacsiga 7-9.
Waqtiga la shaqeynayo waa 5-6 Maalinnimadu waa maalmo 2-3 taasoo keentay wadarta maalmaha shaqada 7-9. Tani waa qiyaasta kaliya ee ku salaysan celceliska maraakiibta iyo wakhtiyada waxqabadka waxaana laga yaabaa inay ka dheeraato ama ka gaaban tahay maalmaha 7-9 ee lagu sheegay.
Haddii aad dalbanayso xidhitaan ama mid ka mid ah adeegyada aan bixino ETA tan ka badan ayaa la sheegay.
Afro Kinky wuxuu u baahan doonaa wakhti dheeraad ah si uu u hirgeliyo.
Inta lagu jiro fasaxyada iyo iibinta / taariikhda xayeysiinta waxaa caadi ahaan maalinta 1-3 laguna shaqeeyo sababtoo ah amarrada badan.
Lambarada raadinta waxaa lagu dhajin doonaa dhammaan amarrada ka dib waqtiga loo ogol yahay.
Fidinta Timaha Dabiiciga ah MAYA mas'uul kama ahan wixii baakooyin ah ee lumay ama la xaday ee nidaamka maraakiibta. Uma celineyno iibsadayaasha wixii khaanad ah ee lumay ama la xaday sababtoo ah xaalado aan la filayn oo ka baxsan xakamaynta timaha "My Hair Extensions". Haddii aad jeclaan lahayd inaad ku darto caymiska khariidadaada fadlan wac ama email noogu soo dir ka hor intaadan amarin amarkaaga.
Fadlan ku dheji amarka taariikhda ku siin doona waqti kugu filan si aad u hesho amarkaaga ka hor timaada timahaaga. Waqtiga lagu shaqeynayo lama soo koobi karo ama la muujin karo. Si kastaba ha ahaatee wakhtiga maraakiibtu waa la muujin karaa.
DAWLADDA CAALAMIGA AH (dhamaan wadamada aan ahayn Mareykanka)
Wixii amarro ah oo lagu meeleeyay dalal kale, fadlan u oggolow maalmaha 5-6 ee lagu shaqeynayo waxaanu boostada kuugu soo diri doonaa lambarka raadinta amarkaaga. Wakhtiga la bixinaayo way ku kala duwanaan doonaan meel kasta.
Amarada ayaa la soo marin doonaa UPS (www.UPS.com) Sicirada qiimaha waxay ku kala duwan yihiin meel kasta.
Gaadiidka wuxuu ka koobnaan karaa 20 $ - $ 65 amarada caalamiga ah.
Masuul kama lihin wax baakado ah oo lumay ama la xaday marxaladda maraakiibta. Uma celineyno iibsadayaasha wixii khaanad ah ee lumay ama la xaday sababtoo ah xaalado aan la filayn oo ka baxsan Xakamaynta Timaha Xayawaanka Timid. Haddii aad jeclaan lahayd inaad ku darto caymiska khariidadaada fadlan wac ama email noogu soo dir ka hor intaadan amarin amarkaaga.
3. Siyaasadda Soo Celinta
ALL SALES WAA IN LAGU QAADO, AMA LACAG LA'AAN. RADIISKA WAXAA LAGA HELAA.
Waad joojin kartaa amarkaaga markii la sameynayo gudaha saacadaha ugu horeeya ee 24. Joojinta waxaa loo tixgeliyaa lacag celin, mana sharafi doonno wixii la kansal gareeyey ka dib markii 24 mudada uu socdo. Iyada oo ku saleysan go'aankayaga waxaa laga yaabaa inaan ogolaano bedelida amarka, haddii aan oggolaan karno in amarka la bedelo waxaa jiri doona amar bixinta lacag bedelka $ 15.
Codsiga isweydaarsiga MUST dhaco maalmaha ugu horeeya ee 7 ka dib markii xirmadaadu ay ahayd bixiyay. Xaaladaha khaaska ah ee ku saleysan kaliya marka la eego Xayiraadda Timaha Xayawaanka Dabiiciga ah ayaa laga yaabaa inay is dhaafsadaan. Si aad timahaaga u beddesho timaha oo dhan MUST lagu soo celiyo unworn, oo aan la gashanayn dhamaan calaamadaha iyo qalabka ku habboon gudahood 7 maalmood ee ugu horeysa dhalmada. Isbedel kasta wuxuu ka hortagi doonaa timaha isdhaafsiga. Tani waxaa ka mid ah laakiin aan ku koobnayn timo kasta oo la gooyey, loola cararay, federed oo la jarjaray, oo la mariyey. Timo kasta oo qoyan, ruxay, la gooyey ama shardi ah lama bedeli karo
Tusaalayaal sababaysan oo aan ku badaleynin isbeddel waa "Waxaan doonayaa wax kale" ama "tani ma ahan intii aan rabay" waa inay noqotaa arrin aasaas u leh sheyga ama qalad ay sameeyeen MNHE. Timuhu waa alaab nadiif ah, mar haddii ay ka tagtay xarunteena dib uma isticmaali karno ama iibin karno markii uu furaha iibiyo. Sidaa darteed siyaasadeena sarrifka iyo lacag celinta waa mid adag.
Waxaa jira khidmad lacag bixin ah oo ah $ 20 dhammaan canshuur celinta, baajiska, iyo isweydaarsiyada ku habboon shuruudaha sarrifka.
Xeerarka Caafimaadka LAW iyo Sharciga Caafimaadka ee Fayadhowrka Qalabka Dabiiciga ah ee Wareegsan LLC waa waajib waana lagama maarmaan in la ilaaliyo heerarkaas. Ma sameyn doono wax kasta oo ka reeban.
Haddii aan go'aansano inaan u oggolaanno iibsadaha iibiyeyaasha inay mas'uul ka yihiin kharashka maraakiibta. MNHE ma bixin doonto ama soo celinayso iibsadayaasha wixii khidmad ah ee maraakiibta soo noqda dibadda ama gudaha.
Sida shirkad kasta, badeecad kasta oo iibsato iibka, oo leh code-dhimis, ama alaabada diyaarka ah ayaa noqon doona iibka kama dambaysta ah.
Macluumaadka MyNaturalHairExtensions.com waxaa lagu bixiyaa "sida". Waxanu ka dhigeynaa wax damaanad ah, oo muujinaya ama qeexaya, isla markaana waxa ay ka dhiganeysaa dhammaan damaanadyada kale, oo ay ku jiraan laakiin aan xadidnayn dhammaan damaanooyinka la sheegey. Dheeraad ah, Shirkaddayda Timaha Wareegga Dabiiciga ah uma baahnid inay bixiso ama sameyso wax matalaad ah oo ku saabsan saxsanaanta, natiijooyinka suurtagalka ah, ama kalsoonidii isticmaalka qalabka ku jira boggeeda internetka ama haddii kale la xidhiidha qalabkaas ama meel kasta oo ku xiran boggan.
5. Dib u habeyn
Qalabka ka muuqanaya MyNaturalHairExtensions.com waxaa ku jiri kara qalab, farsamo, ama khaladaad sawir leh. Anagu ma sheegi karno ama sheegno in mid ka mid ah qalabka ku yaal boggani uu yahay mid sax ah, dhammeystiran, ama hadda. My Hair Extensions Co. ayaa laga yaabaa inay isbedel ku sameeyaan qalabka ku jira boggan internetka oo ay ku jiraan shuruudaha iyo shuruudaha, siyaasadda maraakiibta, siyaasadda dib u soo celinta wakhti kasta oon ogeysiis lahayn. Hase yeeshee, si kastaba ha ahaatee, ha ka go'an in aan cusbooneysiiyo qalabka. Qalabaynta Timaha Wareegga Dabiiciga ah ayaa laga yaabaa inay dib u eegto shuruudahan isticmaalka shabakaddeeda wakhti kasta iyadoon ogeysiis la'aan. Adiga oo isticmaalaya boggan shabakadda waxaad ku heshiineysaa in lagu xiro qaybta hadda ee shuruudaha iyo shuruudaha isticmaalka.
Leave faallo Cancel reply
U dir Comment